लुम्बिनी विकास बैंकको मुनाफा ३.१६ प्रतिशतले घट्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? - नेपालबहस
लुम्बिनी विकास बैंकको मुनाफा ३.१६ प्रतिशतले घट्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
| ७:५२:५१ मा प्रकाशित
१७ बैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा लुम्बिनी विकास बैंकले मुनाफा घटेको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिको तुलनामा बैंकको मुनाफा ३.१६ प्रतिशतले घटेको हो।
गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको बैंकको मुनाफा ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बैंकको ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा संकुचन हुदाँ नाफा प्रभावित भएको हो।
यस अवधिमा बैंकले ३३ अर्ब ६१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २८ अर्ब ४८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। त्यसबाट बैंकले ८४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ब्याज आर्जन गरेको छ।
चुक्ता पूँजी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ। यस्तै बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यस अवधिमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ४४ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १६५ रुपैयाँ ६७ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात १४.६६ गुणा रहेको छ ।
टोखालाई ३ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग ३ मिनेट पहिले
भक्तपुरका अस्पतालमा सकियो अक्सिजन, शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी ६ दिन पहिले
प्रम ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना ४ दिन पहिले
एमालेद्धारा आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी १ हप्ता पहिले
ज्यानमारा भाइरसबाट बाँकेमा थप ६ संक्रमितको मृत्यु २ हप्ता पहिले
विपद् पहिचानको नक्सा बनाउँदै कामपा १ वर्ष पहिले
बिरामीसहित खोलाले बगाएका दुई एम्बुलेन्स प्रहरीद्वारा बचाउ १० महिना पहिले
मानवबेचविखन र जवर्जस्तिकरणीको अभियोगमा ५ जना पक्राउ २ महिना पहिले
नारायणगढ–मुग्लिन सडकका पुल निर्माणको काममा तीव्रता ५ महिना पहिले